MPU-JCB International Debit Card ဆိုတာဘာလဲ?
MCB MPU-JCB Co-Brand Debit Card ဆိုသည်မှာ MCB ATM စက်များ၊ အခြား MPU Logo အမှတ်တံဆိပ်ပါ ATM စက်များ ၊ ပြည်ပရှိ JCB Logo အမှတ်တံဆိပ် လက်ခံ သော ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အရောင်း ကောင်တာ များရှိ POS စက်များတွင် ငွေပေးချေခြင်းများ၊E-commerce ၊ Online Payment များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သော MPU-JCB Co-Brand Debit Card ဖြစ်ပါသည်။
MCB MPU-JCB Co-Brand Debit Card ဖြင့် E-Commerce, ATM Cash Withdrawal, Point of Sale (POS) ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
E-Commerce ဖြင့် Online မှ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဖုန်းဘေဖြည့်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်းရှိ MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များ တွင်သာမက
ဘဏ်စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အခြား လုပ်ငန်း ဆောင်တာများဖြစ်သော ကဒ်စာရင်းလက်ကျန်ငွေသား စုံစမ်း ကြည့်ရှု ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် PIN နံပါတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ MCB ကဒ်စာရင်းတစ်ခုမှ အခြားကဒ်စာရင်းတစ်ခုသို့ စာရင်းပြောင်းငွေလွှဲခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
MPU-JCB Co-Brand Debit Card ဖြင့် ငွေသားအား ပြည်တွင်းရှိ ATM စက်တွင် တစ်ကြိမ် လျှင် အများဆုံး (ကျပ်သုံးသိန်းတိတိ) ထုတ်ယူနိုင်ပြီး၊ တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး (ကျပ်ဆယ်သိန်းတိတိ) ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပြည်ပရှိ ATM စက်တွင် တစ်နေ့လျှင် Oversea ATM’s limitation အထိထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
POS ဖြင့်ဈေးဝယ်ပါက ပြည်တွင်းတွင် တစ်နေ့လျှင်အများဆုံး(ကျပ်သိန်းငါးဆယ်တိတိ) အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ ပြည်ပတွင် တစ်နေ့လျှင် မိမိ အကောင့်စာရင်းတွင် ကျန်ရှိသည့် ငွေပမာဏအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
MCB နှင့် JCB တို့၏ Social Media Page တွင် ကြော်ငြာထားသော Discount များအား ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
International Airport များရှိ JCB Plaza Lounge တွင် ဝန်ဆောင်ခမပေးရဘဲ နားနေနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ပါသည်။
Japan Airport များရှိ JCB Airport Meeting Service ရယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေး ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
JCB Yangon Special Offers Guide Book တွင် ဖော်ပြထားသော Hotels, Restaurants, Golf Facilities, Car Rental Services, Online Shop များတွင် အသုံးပြုရာတွင် အထူး Discount ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင် (မှုရင်း ၊ မိတ္တူ)
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးထားသော Customer (၂)ဦး၏ ထောက်ခံချက် (Name, Bank Acc Number & Signature)
အကောင့်စာရင်းဖွင့်ချိန်ထည့်သွင်းငွေ – ၅၀၀၀ ကျပ်
* စာရင်း စတင် လျှောက်ထား သူသည် စာရင်းစတင်ဖွင့်သည့်နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီး သူဖြစ်ရပါမည်။
MPU-JCB Co-Brand Debit Card ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီး ၊ ကဒ်ကျန်ပါက ဘဏ်ဖွင့်ချိန်များအတွင်း MCB ဘဏ်သို့ ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဘဏ်မှ ကဒ်အားအသုံးပြု၍မရအောင် ယာယီ ပိတ်ထား မည် ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံး / ပျက်စီးပါက အသစ်ပြုလုပ်ပေးပါရန် မိမိကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ဖြင့် ဘဏ်ဖွင့် ရက် များ တွင် ဘဏ်သို့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
MPU-JCB Co-Brand Debit Card ၏ PIN နံပါတ် အား Application Form တွင် ဖြည့်စွက်ထားသော ဖုန်း နံပါတ်သို့ Card Activate ပြုလုပ်ပြီးပါက ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ PIN နံပါတ် (လျှိုု့ဝှက်အမှတ်) ရရှိပါက MCB ATM စက်တွင် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ PIN နံပါတ် (လျှိုု့ဝှက်အမှတ်) အားပြောင်းရပါမည်။ PIN နံပါတ် ကို အခြား မည်သူမှ သိရှိ အသုံးပြုမှုမရှိစေရန်နှင့် အထူးလျှိုု့ဝှက်ထားရမည်မှာ ကဒ်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
PIN သုံးကြိမ်မှားရိုက်မိခြင်း၊ PIN နံပါတ် (လျှိုု့ဝှက်အမှတ်) မေ့လျော့ခြင်း ၊ ATM စက်များ တွင် ငွေထုတ်ရာ တွင် ငွေမရရှိပဲစာရင်းမှ ငွေနှုတ်သွားခြင်း ၊ ATM စက်များတွင်ကဒ်ကျန်ခြင်းတို့ဖြစ်ခဲ့ပါက ဘဏ်များသို့ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်များတွင် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ PIN နံပါတ် (လျှိုု့ဝှက်အမှတ်) မေ့လျော့ပါက မိမိကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းရှိ အခြားဘဏ်များ၏ ATM စက်များ ၊ Oversea ရှိ ATM စက်များတွင်အသုံးပြုပါက fee charges များကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ATM, POS, Ecommerce အသုံးပြုရာတွင် MMK Currency မဟုတ်ပဲ အခြား Currency ဖြင့် အသုံးပြုပါက Currency Convert ပြုလုပ်ရသောကြောင့် Cross Currency Fee ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော ကဒ်သက်တမ်းအထိသာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကဒ်သက်တမ်း extend တိုး၍ ဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ကဒ်သက်တမ်းကုန်ပါက ဘဏ်များသို့သွားရောက်ပြီး Card Replacement အတွက် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကဒ်ပျက်စီး ၊ ကဒ်သက်တမ်းကုန်၍ Card Replacement လာရောက် မပြုလုပ်ပါက ထိုကဒ်များအား ဘဏ်ဘက်မှ ပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Allow making maximum cash withdrawls of MMK 300,000 atatime, MMK 1,000,000 per day in total at any local ATMs displaying MPU/JCB Logo
Annual Fee No Charge 2,000MMK (1st Year Waived)
ATM Withdraw FEE(Domestic) 0.5% 0.5%
MCB JCB Card Discount Promotions
MCB MPU JCB Co-Brand Debit Card ဘယ်လိုလျှောက်နိုင်ပါသလဲ?
MCB MPU-JCB Co-Brand Debit Platinum Card အား လျှောက်ရာတွင် Customer သည် Current Account ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီး စာရင်းဖွင့်ရန် လိုအပ်ချက်များအား Application Form တွင် ဖြည့်စွက်ကာ နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
MCB or another bank’s ATM တွင် ကဒ်ညှပ်ပါက ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ?
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ ရုံးချိန်အတွင်း သွားရောက်အကြောင်းကြားရပါမည်။ သို့မဟုတ် MCB Helpdesk Number 01 2399663 သို့လည်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
PIN number (Password) အဟောင်းကိုမှတ်မိပါက နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ ရုံးချိန်အတွင်း သွားရောက်၍ PIN reset ပြုလုပ်ရပါမည်။ သို့မဟုတ် MCB Help desk Number 01 2399663 သို့လည်းဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
PIN reissue (PIN အသစ်) တောင်းရန် နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ရပါမည်။ သို့ မဟုတ် MCB Help desk Number 01 2399663 သို့လည်း ဖုန်းဆက် အကြောင်း ကြားနိုင် ပါသည်။
MCB or other bank’s ATM တွင် ငွေထုတ်သည့်အခါ ငွေထွက်မလာပဲ အကောင့်ထဲမှ ငွေဖြတ်သွားသည့်အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ?
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ပြီး ငွေပြန်ရရန် Request Form နှင့် တောင်းခံရပါမည်။
MPU-JCB Co-Brand Platinum Debit Card လျှောက်ရမည့် ဘဏ်ခွဲနာမည်များကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?
ဘဏ်ခွဲများအားလုံးတွင် Current Account ဖွင့်နိုင်ပြီး ကဒ် လျှောက်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်ခွဲ နာမည်များနှင့် တည်နေရာများကို သိရှိရန် www.mcb.com.mm သို့ သွားရောက် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
MPU-JCB Co-Brand Platinum Debit Card အတိုးနှုန်း ဘယ်လောက်ရနိုင်ပါသလဲ?
MPU-JCB Co-Brand Platinum Debit Card သည် Current Account နှင့် ချိတ်ဆက် ထား သောကြောင့် အတိုးနှုန်းမရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း Saving Account ဖွင့်ပြီး Current Account မှ Saving Account သို့ ငွေလွှဲ၍ အတိုးရနိုင်ပါသည်။
Mobile Banking App အား Google Play (or) Apple Store တွင် download ပြုလုပ်ပြီး Mobile Banking App မှတဆင့် Balance Inquiry ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) domestic နှင့် oversea ATM များတွင်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ oversea ATM တွင် Balance Inquiry ပြုလုပ်ပါက MMK 500 ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ Account အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွှဲချင်ပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Mobile Banking App အား Google Play (or) Apple Store တွင် download ပြုလုပ်ပြီး Mobile Banking App မှတဆင့် ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
MPU-JCB Platinum Debit Card မှ ငွေထုတ်ရန် ATM စက်ရှာမတွေ့ပါက ငွေဘယ်လို ထုတ် နိုင်ပါသလဲ?
နီးစပ်ရာ MCB ဘဏ်ခွဲများသို့ Identification documents နှင့် MPU – JCB Platinum Debit Card အား ယူဆောင် သွားရန်လိုအပ်ပြီး ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
MPU ecommerce or online internet transactions အသုံးပြုရာတွင် OTP အား ဘယ်လို ရနိုင်ပါသလဲ?
ဘဏ်တွင် register လုပ်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS message ဖြင့် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
MPU-JCB Platinum Debit Card အား မည်သည့် ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများနှင့် ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါသလဲ ?
ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် Current Accounts နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ Customer မှ လိုအပ်ပါက Saving Accounts, Call Accounts များကို ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။